Rudzi: Mamwe mhuka
sei tsuro dzichifa? vakanhonga chikafu chakadai…. Ini ndinofunga coccidiosis inopesana neshure kwekuwandisa kwemvura inonaka. Dyara pahuswa kana huswa hwakaomeswa, usape kabichi zvachose, tsvaga coccidiostatics. Mibvunzo ichave, nyora pachako. ...
Ndiudze, ndeapi marudzi emhuka anosanganisirwa muRed Book reChuvashia? !!! Kana iwe uchida mhuka dzese, saka idzi ishiri, uye mhuka, uye amphibian, uye zvinokambaira, nehove, nezvose, zvese ...
Chii chinonzi cordyceps? Iwe unoziva mutambo uyu wekupedzisira wedu? Saka, ipapo howa hunokanganisa vanhu, asi muhupenyu hunongokanganisa zvipembenene uye huchiita kuti vakwire kuzuva, nekudaro ...
Chii chinonzi saprotrophs? kubva muchiGiriki. sapros yakaora uye ... troph), heterotrophic zvipenyu zvinoshandisa chikafu che organic chikafu. kubatanidzwa kwezvitunha kana tsvina (tsvina) yemhuka. Kutora chikamu mune iyo mineralization ye organic. makemikari, S. anoita akakosha ...
Nyora chimwe chinhu nezve hozhwa yedziva, kana kupa saiti pane chimwe chinhu chakanyorwa nezvake Pondo hozhwa (lat. Lymnaeidae), mhuri yehozhwa kubva kuhurongwa hwemapapu (Pulmonata). Vakapararira vagari vemvura yakachena ...
ndiani Marabou Stork Marabou # 769; (lat. Leptoptilos) rudzi rweshiri kubva kumhuri yeshuramurove, inosanganisira matatu marudzi. Shiri dzeMarabou muhukuru dzinosiyana kubva pa110 kusvika ku150 cm, kureba ...
chii chinonzi honye yeropa? Ropaworms inowanzozonzi sehonye-yakaita. matsvuku machubu anosvika kureba kwe25 mm. Iye anogara muvhu rakafukidzwa nemiti yemadziva, nyanza uye hova, vachitsvaga mavanowana ...
Spores inokura sei mumamosi uye fern? Miti ndeyekusingaperi herbaceous michero. Dzinokura munzvimbo dzinonyorova dzine mumvuri, kazhinji kazhinji pasi pemutumbi wesango uye nemumipata ine hova. Mafern haana chete ...
Chii chekudyisa iyo thrush? Haadyi chinhu kunze kwemaapuro nechingwa. Mafuru anodya zvipembenene, madandaude, makonye, ​​molluscs, ma berries. Zvinoreva kuti izvi zvakamukwanira, saka haadye. Inotutira shiri shiri yepakati nepakati, ...
Ndivanaani maNautilus? Paive neboka rakadai, ikozvino U-Peter, kana uri kutaura nezvazvo) nautilus pompilius, boka rine Vyachislav Butusov, rakakurumbira muma90s, ikozvino zvinoita kunge zvisiri. e nziyo dzakarira ...
Chii chinonzi chestnuts chinodyiwa? Ungaita sei fry ivo? ehe zvinoita kunge zvinodyiwa. muParis vanobikwa pamarasha mumapaki. kuravira kwembatatisi kubva mumoto kunoyeuchidza nezve Edible - chaiko, ...
Mayflies. Vamiririri, pane mapapiro here?, Ndeavane omnivorous here?, Ndeapi mhando yemidziyo yekutaura?, Uye kusimudzira kupi? Mhoroi, mayflies akura HAAZODI zvachose, midziyo yavo yemumuromo yaderedzwa. Kune mapapiro, maviri maviri, kunyangwe yechipiri ...
Ndezvipi mhuka dzinotonhora-ropa? tese tupukanana, hove, amphibian uye zvinokambaira. Muviri wavo temp-pa unowanzo kuve chete 12 C yakakwira kupfuura kana yakaenzana netembiricha iri mukati. Vazhinji vacho ...
Mhungu dzakatetepa makumbo marefu nemuviri mutenderera dzakadanwa chii? Haymaker kana (Latin Opiliones, = Phalangida) boka rezviputi kubva kukirasi yeArachnids. Muna 2005, maive nemhando dzinopfuura mazana matanhatu nemazana matatu evanogadzira uswa, ...
denda chii? chii chinonzi denda? Denda nderekuti hafu yedunhu yatapukirwa. Uye denda ndipo apo nyika yese yatapukirwa nehutachiona hune njodzi kana World Epidemic A denda rinonyanya kuve denda repasi ...
Sei nyuchi dzisingagoni kuruma kakawanda uye nyuchi isinga? nyuchi ine rumborera nebrashi, saka painoruma nekuburitsa matumbo Mushure mekurumwa nenyuchi (kana kuti panzvimbo payo), rumborera runoramba rwuri mukurumwa ...
Ko mole rinobvepi? anoonekwa kubva mumugwagwa, anogona kubhururuka mukati ndokusiira mazai mukapeti obhururuka achienda. kudzivirira izvi kuti zviitike, tenga ese marudzi ekudzivirira pamabhu. mabhora semuenzaniso ...
Mhungu .. usandiudze chepfu kwete muchetura ??? Zvinonzwisisika zvine chepfu. Yakawanikwa ichiri mudunhu reVoronezh. uye Saratov. Ehe, hatina chero chepfu =) Ivo vanogara munzvimbo dzinopisa =) Fu !!!! Ini zvechokwadi ndaizobata ...
mvura iri mu aquarium inonhuwa, yakashandurwa, zvakafanana. Chii chekuita Nzvimbo dzakamira dzakaumbwa muiyo aqua, hydrogen sulfide inoumbwa mavari semhedzisiro yekuora. Izvi ndizvo zvinoguma zvaitika, uye zvikonzero zvacho zvinogona kunge zvinotevera: hazvisi izvo ...
Nzira yekuudza sei kana budgerigar iri nepamuviri? ! : asi sei kunzwisisa kana mazai asina chinhu uye ari viviparous? mapuroti haaiti pamuviri, vanoisa uye mazai mazai. zvishoma nezve kubereka Kubereka ...
Mibvunzo ye77 mu database yakagadzirwa mu 0,506 masekondi.